‘मोदी भ्रमण रणनीतिक हो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
मोदी र भारत सरकारको स्वार्थमा जनकपुर (तराई भेग) मात्र छैन
वैशाख ३०, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रा. जयराज आचार्य नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि हुन् । नेपाली कूटनीतिका धरोहर यदुनाथ खनालसँग निकट रहेर अध्ययन गरेका आचार्यको ‘यदुनाथ खनाल : जीवनी र विचार’ पुस्तक प्रकाशित छ ।
बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका आचार्यको भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बीजेपी नेता अटल विहारी बाजपेयीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येता प्राध्यापक आचार्यसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिबारे कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारी र पुरूषोत्तम सुवेदीले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको ५ सातामै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । उनको यो तेस्रो नेपाल भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो भ्रमण धार्मिक हुँदाहुँदै पनि यसमा राजनीतिक र कूटनीतिक आयम छन् । हामीले बुझ्नु आवश्यक छ : मोदी र भारत सरकारको स्वार्थमा जनकपुर (तराई भेग) मात्र छैन । सम्पूर्ण नेपालमा छ । अहिले पनि मोदी जनकपुर मात्र होइन, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसम्म पुग्नुभएको छ । मुक्तिनाथ हाम्रो उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पर्छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाललाई जोड्ने गरी भ्रमण गरिएको छ । तर यो धार्मिक मात्र होइन, राजनीतिक र रणनीतिक भ्रमण पनि हो । एक कुशल राजनीतिक नेता भएकाले मोदीले आफ्ना धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन उहाँको दृष्टिले हेर्दा स्वाभाविक छ । उहाँ ‘राएसएस’को पृष्ठभूमिबाट उठेर बीजेपीको नेता हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री र सन् २०१४ मा भारतकै कार्यकारी हुनुभएको हो । मोदीका क्रियाकलाप भारत र उहाँका दृष्टिबाट पूर्ण छ । त्यसमा आवश्यक ‘ट्याकल’ गर्ने काम हाम्रोतर्फको हो ।
मोदीको अभिनन्दनलाई लिएर एकातिर देशभित्रै विरोध भयो, अर्कोतिर हाम्रा मुख्यमन्त्रीले औपचारिक मन्तव्यमै भारतीय प्रधानमन्त्रीसामु आफूहरूमाथि विभेद भएको सुनाए, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लामो समय राजनीतिक तहमा दुई पक्षीय सम्बन्ध कायम हुन सकेको थिएन । अहिले पुन: राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भइसकेको हो ?
एकातिर भारतमा हिन्दुत्वको राजनीति गरेर माथि आएको बीजेपी शक्तिमा छ अर्कातिर, दुई हजार वर्षदेखि हिन्दु धर्म अपनाउँदै आएको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको छ । यहाँ एउटा प्रसंग जोडौं– नरेन्द्र मोदीले सार्क मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो शपथग्रहणमा निम्त्याउनुभएको थियो । त्यहाँ सहभागी भुटानी प्रधानमन्त्रीले फर्कने क्रममा काठमाडौं ओर्लेर पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्नुभयो, यो तीर्थाटान मात्र थिएन, यसको कूटनीतिक संकेत थियो । दक्षिण एसियामा बगेको नयाँ हावाप्रति संकेत थियो यो । भुटानका प्रधानमन्त्री हिन्दु त हुनुहुन्थेन, तर पनि राजनीतिक र कूटनीतिक चाल देखाउनुभयो । हाम्रा नेताहरूले यस्तो संकेत बुझ्नुभएन । जबकि, जंगबहादुर राणाले १८५७ मा भएको आन्तरिक विद्रोहमा भारतीयलाई होइन, अंग्रेजलाई मद्दत गरे । यसले गर्दा ४ जिल्ला फर्काए । उनले तत्कालीन बहाव बुझे । नेतृत्वले आफ्नो राष्ट्रको हित बुझ्नुपर्छ । त्यो हावा बुझ्नुपर्छ ।
हो, अहिले त्यस्तो कूटनीतिक चाल त्यति बुझिएको पाइँदैन । कूटनीतिमा हावा कता बगेको छ त्यसको जानकारी राख्ने निकाय सशक्त छैन । कहाँ के भएको छ, हाम्रा पछिल्लो नेतृत्वले ख्याल गरेको देखिँदैन । बलियो सरकार बनेको छ । यसमा नेतृत्वले ख्याल गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । कूटनीतिमा कान र आँखा खुला राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय वेग बुझ्न आवश्यक छ ।
तपाईंले हाम्रो संविधानको धर्मनिरपेक्षताप्रति इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै पनि । कतिपय नेपालीले त्यो षड्यन्त्रपूर्वक राखिएको शब्द भनेका छन् । तयार गरिएको लिखतमा कलमले थपेको आशंका छ । यस्ता विषय संविधानसभाले होइन, जनमत संग्रहले निर्णय गर्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ हामीले सोच्दै सोचेनांै । यहाँहरूलाई थाहै छ: स्विट्जरल्यान्डजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत ३ सय ३६ पटक जनमत संग्रह भइसकेको छ । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयमा जनतासित सोधिन्छ । हामी लोकतन्त्रको नारा त दिन्छांै तर जतनताको भावनालाई पन्छाएर निर्णय लिन्छौं । यही हाम्रो समस्या हो । आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्छांै । यो ठीक छैन ।
यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको कारण हाम्रो देशभित्रकै हो । पञ्चायतका ३० वर्षमा राजाकै प्रत्यक्ष शासन थियो, तर त्यस अवधिमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष काम गर्न पाएनन् । त्यतिबेला राजालाई कसले रोकेको थियो ? बहुदल आएपछि पनि हामी आफैं कहिले मध्यावधि निर्वाचन त कहिले सांसद किनबेचको खेलमा लाग्यौं । विवाद त हामी आफैं गर्छाैं । संस्कृतमा कूटनीतिसम्बन्धी एउटा भनाइ छ– ‘द्वयोर्विवादे तृतीयस्य लाभ:’ अर्थात दुईजनाबीच झगडा भयो भने तेस्रो पक्षले लाभ लिन्छ । हामीले आपसमा झगडा गरेपछि त बाह्य तत्त्वले काम गर्छ नै । यथार्थमा १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, त्यो ०७ सालको दोस्रो संस्करण थियो । तर हाम्रा नेताहरूले बुझेनन्, मैले त त्यसअघि नै पनि भनेको थिएँ यो कुरा । हामीले आफ्नो घरको व्यवस्थापन राम्ररी गर्‍यौं भने बाह्य पक्षले केही गर्न सक्दैन । आन्तरिक शक्तिहरू मिल्दा त हामीले संविधान जारी गरेर नाकाबन्दीजस्तो परिस्थितिको पनि सामना गर्‍यौं नि ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको आँखाबाट नै हेर्ने गरेको धारणा कत्तिको सत्य हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तमा यस्तो स्वाभाविक हो । यो महत्त्वपूर्ण तत्त्व पनि हो । सबैले टाढाबाट हेर्दा भारतका चासोको विषय हो भनेरै हेर्छन् । लगानीकै विषयमा पनि उनीहरू पहिला सोच्छन– भारतले नेपालमा कत्तिको लगानी गरेको छ ? आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिले किन लगानी गरेको छैन भनेर सोच्छन् । त्यसैले राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि भारत तर्फबाट हेर्छन् । नेपाल भारतबाट तीनतर्फ घेरिएको छ, त्यसैले यहाँको नक्सा मात्र हेरेर पनि उसले भारतकै दृष्टिबाट हेर्ने मनोविज्ञान बनाउँछ ।
चीन नेपालमा भारतसित प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन त अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । चीन विश्वशक्ति हो भने भारत क्षेत्रीय शक्ति हो । चीनले नेपालमा भारतसित प्रतिस्पर्धा गरेर के पाउँछ ? चीनको नेपालसितको व्यापार १ अर्ब डलर हाराहारी मात्रै छ । भारतसित ८५/८६ अर्ब डलरको छ । भारसितको त्यत्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई बिगारेर चीनले नेपालसित किन केही गर्न चाहन्छ र ? अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को प्रसंग छ, त्यो पनि नेपालका निम्ति होइन, चीनले आफ्नै लागि भारत जाने बाटो बनाउन लागेको हो । यो तथ्य हामीले बुझ्नुपर्छ ।
मोदी धर्म, कूटनीति र राजनीति सबैलाई मिसाएरै अघि बढिरहनुभएको छ । उहाँको त्यो चरित्र हामीले बुझ्नुपर्छ । ‘सर्वे लोका : राजधर्म प्रविष्टा:’ भनेजस्तै सम्पूर्ण क्रियाकलाप राजनीतिमै हुन्छन्, यसमा आश्चार्य छैन । आफ्नो स्वार्थ त जसले पनि हेर्छ नि! उहाँले आफ्नो हितका लागि जे गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको दृष्टिकोणबाट सामान्य नै हो ।
यहाँ अहिले युरोपेलीहरूको खेल छ, सानाठूला सबैको । सम्बन्धले जटिलता पनि ल्याउँछ । त्यही जटिलता व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई गाह्रो भइरहेको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा हामीले कसरी खेल्न नदिने भनेर सोच्न जरुरी छ । खासगरी पश्चिम नेपालमा धर्मान्तरको समस्या बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो भनेको भोलिको द्वन्द्वको वीजारोपण हो, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ ०८:१७
थोरै तथा गुणस्तरयुक्त कर्जा विस्तार प्रक्षेपण गर्नु र जोखिम न्यूनीकरणका उपायतर्फ ध्यान दिनु दीर्घकालीन प्रतिफलका हिसाबले फाइदाजनक हुनेछ ।
वैशाख ३०, २०७५ कुमार लम्साल
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०१३/०१४ बाट निरन्तर ओरालो लागेको रेमिट्यान्ससमेतले बैंकहरूको तरलतामा परेको प्रभाव हामीले भोगिआएकै कुरा हो । जेठदेखि असोजसम्म बढेको सरकारी खर्च तथा दसैंताका अन्तरिम रूपमा बढेको रेमिट्यान्सबाट वृद्धि भएको निक्षेप प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तथा कत्तिकदेखि चैत/वैशाखसम्म तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरू व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था केही वर्षदेखि निरन्तर रहिआएको छ ।
यस्तो लाग्छ कि मानौं तरलता बैंकहरूको एक मात्र समस्या हो । तर के घट्दो विप्रेषण आप्रवाहले बैंकलाई पार्न सक्ने प्रभाव तरलतामा मात्रै सीमित छ त ? सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम घट्न थालेको, तेलको मूल्यमा आएको कमीले खाडी मुलुकहरूको राजस्व घटेको, कतार तथा साउदी अरबबीच समस्या आएको तथा विश्व बैंकले समेत ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०१८’ मार्फत विप्रेषण घट्ने प्रक्षेपण गरेको कारणले रेमिट्यान्स वृद्धिदरको घट्दो क्रम नरोकिने अनुमान गर्ने हो भने केही वर्षमै बैंकहरूले वहन गर्नुपर्ने विप्रेषण सम्बद्ध जोखिम, तरलता मात्र सीमित नरहेर अन्य आयाम, विशेषत: कर्जा जोखिम बढ्ने अवस्था देखिन्छ । देशका ५६ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको स्रोत एक वा बढी व्यक्तिले पठाएको विप्रेषण रहेको तथ्यांक एकातर्फ छ भने विप्रेषण आय देशको जीडीपीको २७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ ।
तर घट्दो विप्रेषण दरले आगामी केही वर्षभित्रै घरपरिवारको आम्दानीमा उच्च गिरावट आउने र त्यसले जीडीपी वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस्तोमा सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बैंकका कर्जामा नकारात्मक असर पर्ने नै छ । आम्दानी घटेसँगै घट्ने उपभोगले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आयात घटाउनेछ जसले त्यस्ता उत्पादक र आयातकर्ता तथा ती उत्पादक र आयातकर्तामा निर्भर अन्य व्यवसाय र व्यक्तिहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ । घट्दो आयात र उत्पादनले सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउने सम्भावनासमेत छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर (बढी जोखिमयुक्त) ऋणीहरूले एकसाथ ‘डिफल्ट’ गर्ने सम्भावनाप्रति बैंकहरूले कति ध्यान पुर्‍याएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
गत वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष ५.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण रहेको अवस्थामा आर्थिक मन्दीको कुरा बेमौसमी बाजाजस्तो सुनिन सक्छ । तर आर्थिक वृद्धि भइरहेकै बेलामै उच्च जोखिमयुक्त कर्जा बढी जाने हुन्छ र यस्ता कर्जा मन्दीको अवस्थामा डिफल्ट हुन्छ । हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, ‘वित्तीय प्रणालीमा चक्रीय संकटहरू आइरहने डर हुन्छ । त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपाय गर्नुपर्ने हो, तयारीमा केन्द्रीय बैंक बस्नुपर्छ ।’
यस भनाइको आशय समग्र वित्तीय क्षेत्र हर समय आर्थिक मन्दीबाट आउने जोखिमका लागि तयार रहनुपर्छ भन्ने नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा तथा सँगसँगै त्यही कारणले विदेशी मुद्राको समेत अभाव हुँदा आयात घट्न गई सन् २०१४ मा ६.३ प्रतिशत रहेको नाइजेरियाको वृद्धिदर २०१५ मा घटी २.७९ प्रतिशत हुँदै २०१६ मा १.५१ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिदरमा पुगेको थियो । नाइजेरियाका बैंकहरूको २०१४ को २.९ प्रतिशतको खराब कर्जा भने २०१५ मा ५.३ प्रतिशत तथा २०१६ मा १४ प्रतिशत पुगेको थियो । यो तथ्यबाट समेत केही सिक्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पुँजी वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्‍याएपछि नेपालका बैंकहरू ठूला तथा बलिया भएका छन् । तर यो ‘ठूलो र बलियो’ हुनु सँगसँगै थपिएको पुँजीलाई सन्तुष्ट राख्नुपर्ने (क्यापिटल सर्बिसिङ) दायित्वसमेत थपिएको छ । पारम्परिक बैंकिङ गरिरहेका बैंकहरूमा थपिएको पुँजीसमेतमा आशातीत प्रतिफल दिन हाललाई कर्जा विस्तार गर्नुबाहेक धेरै विकल्प देखिँदैनन् । तर सबै बैंकमा एकैचोटि जस्तो पुँजी थपिएको अवस्थाले कर्जा विस्तारमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने हँुदा आवश्यकभन्दा बढी जोखिम लिएर मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाले कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता गराउँछ नै । यस्ता किसिमका बढी जोखिमयुक्त कमजोर कर्जा बैंकहरूले दिइरहेका छन् भन्ने कुरा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइबाट (कान्तिपुर, वैशाख ७, २०७५) पनि बुझ्न सकिन्छ ।
एकातर्फ आउँदा वर्षहरूमा देशको आर्थिक गतिविधिमा कमी आई कमजोर कर्जा डिफल्ट हुने सम्भावना तथा अर्कोतर्फ राम्रो प्रतिफलको आशामा कमजोर कर्जाहरू अझ विस्तार हुने सम्भावनाका बीचमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र छ । लगानीकर्ताका प्रतिनिधि (बैंकका सञ्चालकहरू) ले बढी प्रतिफलको आशा राख्नु र त्यहीअनुसार व्यवस्थापनलाई कर्जा विस्तारको निर्देशन दिनु अस्वाभाविक होइन । तर त्यो प्रतिफलका लागि कस्तो किसिमको कति जोखिम लिनुपर्ने (कुन क्षेत्रमा, कुन गुणस्तरको कर्जा दिनुपर्ने) हुन्छ र सो जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको दक्षता तथा आवश्यक संख्या, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कर्जा नीति तथा कार्यविधिको प्रभावकारिता, विद्यमान ‘क्रेडिट रिस्क कल्चर’ आदि जस्ता बैंकका पूर्वाधार क्षमता कस्ता छन् तथा कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्य के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिएको छ भन्नेमा पनि सञ्चालक समिति त्यतिकै जानकार हुन जरुरी छ ।
यहाँ भुल्न के हुँदैन भने प्रतिफलको अधिकार सञ्चालक समितिको हो भने जोखिमको स्वामित्व पनि उसैको हो । समितिले कर्जा जोखिमप्रति कुनै चासो देखाएन र खालि प्रतिफलको मात्र कुरा भयो भने व्यवस्थापनले समेत कर्जा जोखिमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा झार्ने सम्भावना बढ्छ र ब्रान्च तहमा आइपुग्दा त मात्र ‘टार्गेट’ आइपुग्छ, जोखिमको कुरा बीचमै कतै हराइसक्छ । प्रतिफल तथा जोखिमको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको एवं जोखिमको स्वामित्व समितिको भएकाले नै बासेल कमिटी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम रणनीति र ‘क्रेडिट रिस्क एपेटाइट’ बनाई लागू गराउने तथा त्यसको आवधिक समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिएका हुन् ।
सामान्यतया देशमा बढ्दो आर्थिक क्रियाकलाप (इकोनोमिक ग्रोथ) रहेको अवस्थामा उच्च जोखिमयुक्त कमजोर ऋणीहरूको समेत कर्जा तिर्ने क्षमता हुन्छ । केही कर्जा फाट्टफुट्ट रूपमा नतिरिने (एक्स्पेक्टेड लस) हुन्छन् । केही कर्जा बिग्रिए नै भने पनि नाफा उच्च रहने हुँदा बैंकको स्वास्थ्यमा खासै नकारात्मक असर पर्दैन । तर जब कुनै कारण (रेमिट्यान्स घटेर वा अन्य) ले देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आउँछ, त्यसबेला कमजोर ऋणीहरूले प्राप्त गरेका उच्च जोखिमयुक्त कर्जा नतिरिने सम्भावना बढेर जान्छ । ठीक यसै बेला धितोमा राखिएका घरजग्गा र सेयर आदिको भाउमा समेत गिरावट आउने हुन्छ, जसले कर्जा खराब कर्जा असुलीलाई घटाइदिन्छ । तसर्थ कुनै पनि बैंकले कर्जा जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिई कर्जा बढाएर बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबमा मात्रै कुल कर्जाको पर्याप्त अंश कमजोर ऋणीहरूमा पर्न गएको छ भने आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बैंकले ठुलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्को सम्भावना देखेर नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ र ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ को प्रावधान तथा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।
विप्रेषण घटेर बाहेक अन्य कारणले समेत आर्थिक मन्दी आउन सक्छ । तर त्यस्तो मन्दी कहिले आउँछ भन्न सकिन्न । बैंक आर्थिक प्रगति वा आर्थिक मन्दी दुवै अवस्थामा अविच्छिन्न रूपमा उचित प्रतिफल सहित सञ्चालित हुनुपर्ने संस्था हो । बैंक सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा समेत बैंकलाई बलियो रूपमा उभ्याई राख्न हरसमय कर्जा जोखिमको अवस्थाप्रति ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । अहिले सम्भवत: सबै बैंक आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा छन् । प्रतिस्पर्धा उच्च रहेको यो समयमा उच्च प्रतिफलमा भन्दा पनि कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आउँदो वर्ष फेरि पनि तरलताको समस्या व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना छँदै छ भने कर्जाको उच्च विस्तार प्रक्षेपणको सट्टा थोरै तर गुणस्तरयुक्त कर्जा विस्तार प्रक्षेपण गर्नु र विद्यमान कर्जा पोर्टफोलियो समिक्षा गरी उच्च जोखिमयुक्त कर्जा पहिचान गरेर जोखिम न्यूनीकरणका उपायतर्फ ध्यान दिनु दीर्घकालीन प्रतिफलका हिसाबले फाइदाजनक हुनेछ । यसका लागि सञ्चालक समितिको सरोकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आशा गरौं, व्यवस्थापनले बजेटका माध्यमबाट प्रस्ताव गर्ने प्रतिफलसँग जोडिएर आउने कर्जा जोखिमबारे सञ्चालकहरूले प्रश्न गर्नेछन् र छलफलका क्रममा जोखिम घटाउनुपर्ने अवस्था देखियो र जोखिम घटाउँदा प्रस्तावित तत्कालीन प्रतिफल घट्ने भयो भने पनि सञ्चालक समिति त्यसमा राजी हुनेछ ।
लम्सालसँग विभिन्न बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव छ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ ०८:१४